Wararka - Ku laabo guluubkii ugu horreeyay ee Edison ku raaca guluubka quruxda saafi ah
Sannadkii 1809-kii, hal-abuure Englisg Humphry Davy ayaa abuuray nalkii ugu horreeyay ee koronto. Wuxuu xirxiray ulaha laga sameeyay dhuxusha, nooc ka mid ah walxaha kiimikada kaarboon, iyo batteriga leh laba fiilooyin. In kasta oo iftiinku uusan sii dheerayn, haddana wuxuu muujiyey in qalabka qaarkood ay noqdeen kuwo aad u kulul oo ay dhalaalaan marka korontadu ay dhex marto. 1870-yadii, hal abuure Mareykan ah Thomas Edison ayaa tijaabiyay guluubka nalka korontada ku shaqeeya. Noociisu wuxuu ahaa kiis galaas hawo adag leh oo ay ku jiraan silig wareegsan, oo la yiraahdo fiilo, kaas oo ku xirnaa qulqulka korantada ee loo yaqaan 'current'. Haddii durdurku xoog ku filnaado, fiilada ayaa dhalaalaysa-kulul. Fiilo hore ma dheereyn, laakiin sanadkii 1879-kii wuxuu abuuray fiilo muddo-dheer socotey oo laga sameeyay kaarboonka.
Qaar badan oo naga mid ah ayaa yaqaana sheekada kor ku xusan, laakiin ma garanaayaan sida guluubka koowaad u eg yahay.
Haa, waa sidaan oo kale.
Waxaan soo daabici doonnaa qayb ka mid ah alaabooyin gaar ah si aan u qadarinno xusuusta hal-abuurka guluubka oo leh fiilo dabacsan oo dabacsan taas oo ay ku shaqeyneyso darawal watta DC 24V.
Waxaan ku martiqaadaynaa asxaabta naqshadeeye ee naqshadeynta taxanahan si daacad ah u soo dhoweysay.
Halkan, waxaan jeclaan lahaa inaan ku taxo tilmaamaha naqshadeynta ee naqshadeeyayaasha iyada oo tixraac laga helayo aragtida warshadaha.
Qaabka guluubka, guluubku ma noqon karo mid aad u weyn ， maxaa yeelay hadday aad u weyn tahay, culeysku wuu badnaan doonaa oo muraayadda dhalada ayaa laga yaabaa inaysan culeyska qaadi karin, sidaas darteed waxaan kugula talineynaa dhexroorka nalalka aan ka badneyn 200mm, iyo kan sare kama badna 300mm.
Qaab dhismeedka fiilo jilicsan, qaabdhismeedka fiilo jilicsan ayaa qaabeyn kara qaab kasta oo aad sawiri karto. Waxay u baahan tahay in si fiican loo waafajiyo qaabka muraayadda.
Midabka muraayadda, waxay noqon kartaa noocyo badan oo midabbo ah oo dhammaaday, sida midab cad, oo qiiq badan, naxaas ah, macdan ah, midab qaansoroobaad leh, midab buluug cagaaran oo huruud ah, midabka aad ku hubisay alaabooyinka hadda jira. sida ugu macquulsan.
Waxaan hogaamineynaa soo saaraha nalalka qurxinta, waxaan leenahay dhalada noo gaar ah oo soo afuufa wax soo saarka. Mastarkii ugu xirfada badnaa afuufida.
Waxaan ku jirnaa heerka qoto dheer ee warshadaha nalalka tiknoolajiyada hogaaminaya, waxaan leenahay waax injineer koronto u gaar ah iyo qalabka baaritaanka korantada iyo qolka baaritaanka.
Kaliya si loo hubiyo in dhammaan badeecadaha soo koraya ay raacaan qawaaniinta Midowga Yurub iyo qawaaniinta Mareykanka iyo kuwa kaleba.
Quruxda saafiga ah ee laambaduhu waa waxa mashruucan lagu dabagalayo. Waxaan jeclaan lahayn inaan maqalno cod ka duwan. Xaqiiqdii, waxaan kaliya nahay xarun warshad OEM oo ku taal Shiinaha, sidaa darteed fikraddaadu had iyo jeer waxay noqon doontaa taada. Waxaan kaa caawineynaa inaan ka dhigno sawirkaaga iftiin qurux badan oo codsi heer sare ah.